Vata-bara fananganana trano fanaka ao amin'ny zaridaina | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Karazam-baravarankely manamboamboatra ao amin'ny saha
Vata-trano fanatodizam-bokatra: fomba fiasa!
Aiza no tokony hikirakiran'ny boaty fananganana tena?
Matetika izy ireo no mahita azy any an-jaridaina na ala: akany boaty ho an'ny vorona an-trano. Izay noheverin'ny maro ho tsy ilaina na toy ny fialamboly, fa mamonjy ny vorona sasany amin'ny ririnina.
Boky fandoavam-bola natao ho an'ny fialokalofana ho andro fialantsasatra mangatsiaka
tena vita akany boaty dia tsy vitan'ny mafana ihany, fa manompo amin'ny ririnina ho toy ny fialofana amin'ny hatsiaka. Ny Fikambanana Fiarovana ny natiora any Alemaina aza mahita ny tsy fisian'ny akanjo fialokalofana ho an'ny vorona, satria tsy hita ao anaty alantsika ny hazo ala sy maitso, na dia ny zohy voajanahary aza dia tsy fahita firy.
Manamboara boaty ho an'ny fanaka
Noho izany dia zava-dehibe ny manome ny vorona amin'ny toerana fambolena kanto amin'ny endriny tena vita akany boaty tolotra.
Manamboara boaty any am-bohoka miaraka amin'ny ankizy
Mazava ho azy fa afaka iray ihany koa ianao akany boaty Buy. Saingy mahagaga sy mahafinaritra izany, ny Kitapo fananganana hananganana miaraka amin'ny ankizy ny tenany, Voalohany, ny fihetsika iraisana toy izany dia fotoana sarobidy ihany no ifampiresahana, faharoa, ny ankizy dia mianatra bebe kokoa momba ny fihetsika ataon'ny vorona sy ny safidiny.
Izany ve akany boaty Rehefa tafapetraka ary mankafy ny fitsidihana be atao dia mahatsapa ny fahombiazana amin'ny ankizy ny ankizy boaty fananganana tena. Amin'ny ririnina, miaraka amin'ny vintana kely, dia mety mahita trondro, trondro, ary vorona maro hafa - ary na dia ny hoditra aza - mijery ny akany boaty to use as a place to sleep.
Amin'ny ankamaroan'ny ririnina dia mamonjy ny boaty fananganana tena na dia ny an'ny vorona sasany aza. Satria, indrindra fa amin'ny ririnina, rehefa mihinana sakafo kely ireo biby ireo dia mandoro karazan-tavy. Ny alina mangatsiaka dia efa voaheloka ho faty.
Der boaty fananganana tena dia tsara indrindra amin'ny hazo, kitapo na hazo beech, izay tokony ho roa santimetatra matevina. Raha tokony ho an'ny fikarakarana hazo (alikaola, sns.) Dia tokony ampiasaina solika na menaka oliva na menaka tontolo manodidina, raha tsy izany dia mampidi-doza ny biby ianao.
Ny federasiona momba ny fiarovana ny natiora ihany koa dia nanoro hevitra ny hampiasa zana-tsofina fa tsy ny fantsika, noho izany dia afaka manadio ny boaty any aoriana. Ny tena zava-dehibe dia ny lavaka fantsona any amin'ny faran'ny boaty fananganana tena.
Miankina amin'ny karazana vorona tokony hapetraka ao anaty boaty, ny iray tsy maintsy mamaritra ny halehiben'ny fidirana. Amin'ny milimetatra telimitatra, ohatra, ny sompitra, ny lohateny lehibe, ary ny fody dia afaka mitsambikina, raha dimy milimetatra kosa dia tsy misy afa-tsy karazana titit hafa ihany no afaka manao izany.
Ny habetsaky ny atitany koa dia manapa-kevitra momba ny vorona, ny azy ireo boaty fananganana tena mitantara. Tsara ny manamarina amin'ny zanakao mialoha hoe iza amin'ireo vorona eo amin'ny faritra misy azy ireo dia miankina amin'ny boaty fanatobiana ary manitsy ny habeny araka izany. Tokony ho roa ambin'ny folo ka hatramin'ny 12 santimetatra ny fototry ny boaty. Azo antoka fa azo atao mora foana ny manomboka amin'ny Internet ny boky fanorenana mety tsara sy mazava.
Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy boaty fananganana tena, Ny lavaka fidirana dia tokony manondro ny atsinanana ary tokony hijanona roa metatra ambonin'ny tany ny boaty. Amin'ny hazo azonao boaty fananganana tena manamboara fonosana marika na fantsika hodi-kazo.
Ankoatr'izay, tokony ho azonao antoka fa tsy misy rano hipoitra rehefa mitrona izany: Noho izany, avelao ny boaty handresy kokoa, na dia tsy mahita tsara ny Einflugloch aza. Ataovy azo antoka fa tsy azo alaina amin'ny saka na saka ny boaty!
Toerana azo tsapain-tanana eo akaikin'ny hazo dia trano, trano, rindrina trano sy balkon. Voasary ny boaty aorian'ny fotoam-pialan-tsasatra. Esory fotsiny ny nosy taloha sy ny boaty fananganana tena miborosy avy. Aoka ho azo antoka fa hitafy fonon-tanana ianao ary tsy hiditra ao anaty trano ny boaty, misy loza mety hiteraka aretina eto!
Ny fotoana tsara indrindra, iray boaty fananganana tena Ny fiakarana dia ny fahalavoana. Azonao atao ny mamono sy manjaitra!
Toeram-ponenan'ny Zaridaina | Trano an-trano
Pejy misy tranokala misy zaridaina
Famaritana pejy fianakaviana ao amin'ny zaridaina
Tantara fohy ho an'ny ankizy - zava-niainana tao an-jaridaina
Sary amin'ny tranom-barotra misy zaridaina